आफ्नै खर्चमा बंगलादेश : २ स्वर्ण पदक ! | Ratopati
आफ्नै खर्चमा बंगलादेश : २ स्वर्ण पदक !
personरातोपाटी संवाददाता exploreसुर्खेत access_timeपुस २९, २०७८ chat_bubble_outline0
कर्णाली प्रदेशका खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कराँते प्रतियोगितामा २ स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका छन् । बंगलादेश गोजुरियो कराँते ‘दो’ संघको आयोजनामा गत डिसेम्बर २६ देखि २९ सम्म चलेको वि.जी. अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण प्रतियोगितामा सहभागी कर्णालीका खेलाडीले २ स्वर्णसहित २ कास्य पदक जितेका हुन् ।